Home News Salaadiinta Puntland: “..wiilkaa madaxa yar yaanu naga bur-burin dowladii 20ka sano aanu...
Salaadiinta Puntland: “..wiilkaa madaxa yar yaanu naga bur-burin dowladii 20ka sano aanu soo dhisaynay”
Salaadiinta iyo aqoonyahanadda reer Puntland ayaa door wayn ka qaatay in la dajiyo xaaladii kacsanayn oo keeni kartay in qabaa’iilka reer Puntland ee Nabadda kuwada noolaa la iska horkeeno. Xalay ayaa salaandiintu kula talisay hogaanka Puntland in shirka la ogolaado iyada oo la ogyahay in ay qalad tahay in shir ayan Puntland ralli ka ahayn ka dhaco Garowe. Midka mida salaadiinta reer Puntland ayaa ku yir MW Cabdiwali “..wiilka madaxa yar ee Soomaliya waalay, yaanu naga bur-burin dowladii 20ka sano aanu soo dhisanay” waxa uu ku daray ” dhaqan caruur ayuu leeyahay, Kheyre mana u muuqato in uu u dhaqamayo sidii dowladnimada ahayd, wixii dhacay magaca Farmaajo aanu isaga dayno, marka ay naga tagaana martida aan aanaga si gaar ah uwada xisaabtano”
Previous articleShirkii golaha wasiiradda oo hadda ka socda Garowe, Maxaa looga hadlayaa?
Next articleYarisow: Bishaan mushaarka shaqaalaha dib ayuu u dhacaya, qasnada lacag kuma jirto!
Hogaamiyaha Jubaland oo dib ugu soo laabtay Kismaayo kadib Safariisii Kenya
C/wali gaas”Imaaraat-ka iyo Dowlada Federaalka ah waan dhex-dhaxaadinayaa”